Zimbabwe Yogadzirira Kuverengwa kweVanhu
Bazi rinoona nezvekuverengwa kwezvinhu munyika, reZimbabwe National Statistics Agency, ratanga kugadzirira chirongwa chekuverenga vanhu munyika. Chirongwa ichi chichaitwa muna Nyamavhuvhu.
Chirongwa ichi chichaitwa kwemazuva mapfumbamwe kutanga nemusi wa18 kusvika 27 Nyamavhuvhu.
Pari zvino Zimstat iri kudzidzisa vashandi vayo vachange vachiverenga vanhu mumativi mana ose enyika.
Kuverengwa kwevanhu muZimbabwe kunoitwa mushure memakore gumi oga oga. Verengo yegore ra2002 yakaratidza kuti munyika maiva nevanhu mamiriyoni gumi nemana.
Zimstat iri kukurudzira veruzhinji kuti vaverengwe kuitira kuti hurumende ive nehuwandu hwechokwadi hwevanhu vari munyika.
Mukuru wesangano re Coalition for Market and Liberal Solutions, uye vachiongorora nyaya dzekugarisana kwevanhu, VaRejoice Ngwenya, vanoti chirongwa ichi ckakakosha zvikuru.
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vaparura hurongwa hwehurumende hwekukurudzira veruzhinji kuti vachengetedze mvura mumaguta senzira yekuti veruzhinji vagare vaine mvura nguva dzose. Chirongwa ichi chinoitwa apo hurumende iri mubishi kurwisana nezvirwere zvinokonzerwa nekushayikwa kwemvura yakachena pamwe nehutsvina.
Gurukota rezvemvura, VaSamuel Sipepa Nkomo, vatiwo hurumende iri kushandawo zvakaomarara kuti ipedzise kuvaka madhamu anoti Mazowe, Tokwe Mukosi pamwe ne Kunzvi kuitira kuti pasave nedambudziko remvura munzvimbo dzakawanda.